Requesting OIC and ISLAMIC LEADERS to pressure UN, UNSG, UNGA and UNSC to take action on U Thein Sein, Min Aung Hlaing, 969 TERRORISTS and Rakhine State government | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« “နှမ ရွှံ့ပိတ်နေလေတော့ ဝီရသူနဲ့ ၉၆၉ အပေါင်းအပါတို့ရေ”
မိမိဇာစ်မြစ်ကို မိမိမသိသော မြန်မာ (MYANMAR WHO DON’T KNOW THEIR OWN ORIGIN) »
၃၀.၆.၂၀၁၃ ရခိုင်ပြည်နယ် သံတွဲမြို့မှာ နေအိမ်ခြောက်လုံး မီးရှို့ခံခဲ့ရပါတယ်။ သေချာစုံစမ်းကြည့်တော ကိုဌေးလွင်ဦးရဲ့ အမေအိမ်၊ အစ်ကိုအိမ်၊ ယောက်ဖအိမ်၊ အစရှိသဖြင့် ကိုဌေးလွင်ဦးရဲ့ အဓိကမိသားစုဝင်တွေရဲ့အိမ်တွေ ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း လေ့လာသိရှိရပါတယ်။ မြန်မာအစိုးရက ဒီလိုရက်စက်ခဲ့ကြောင်းကို လူကြီးမင်းတို့ သိရှိပြီးဖြစ်မှာပါ။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ သမ္မဦးသိန်းစိန်က အမေရိကန်ကို အလည်အပတ်သွားရောက်နေစဉ်မှာ အိမ်ဖြူတော်ရှေ့က ကိုဌေးလွင်ဦးရဲ့ တရားသံကိုနားဆင်ခဲ့ပုံမှ ရလဒ်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ထင်ရှားနေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုဌေးလွင်အတွက်တော မိသားစုဝင်တွေအတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်ရှာမှာပါ။ ဒီထက်ပိုပြီ ဘားမှဝမ်းနဲးစရာ မရှိပါ။ ကိုဌေးလွင်ဦးရဲ့ ရပ်တည်ချက်တွေကတော ဘယ်တောမှ ပြောင်လည်းမည်ဟု မဆိုနိုင်။
ကျွန်တော် မြန်မာပြည်က မိသားစုနဲ့ လုံးဝ အဆက်အသွယ် ပြတ်တာ အနည်းဆုံး ၆ လ လောက် ရှိနေပါပြီ။
အခု သံတွဲမြို့မှာ ကျွန်တော့မိသားစုကို target ထားပြီး လုပ်ကြံသည် ဖြစ်စေ၊ မိသားစုများ ကို အကြပ်ကိုင်ပြီး ကျွန်တော့အား အမျိုးသားရေး ထမ်းဆောင်မှု မှ နောက်ဆုတ်သွား စေရန် ကြံစည်သည် ဖြစ်စေ-၊ ကျွန်တော့အနေဖြင့် အမျိုးသားရေး ထမ်းဆောင်မှုများကို ဘယ်တော့မှ နောက်ဆုတ်မှာ မဟုတ်ပါ။
မြန်မာပြည်အတွင်းက မြန်မာ မွတ်ဆလင် အွမ္မတ်တစ်ခုလုံး ခံစားနေရချိန်မှာ မိသားစု တစ်ခုတည်းကို ငဲ့ကွက်တဲ့ လူတစ်ယောက် အဖြစ် ကျွန်တော် မရပ်တည်နိုင်ပါ။
အွမ္မလွတ်မြောက်မှုနဲ့ တန်းတူညီမျှရရှိမှု အတွက် ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ မြန်မာမွတ်ဆလင်များကို ကတိပေးပါတယ်။
Soe Thu Moe shared Majestic Archer’s post.
ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်း သံတွဲမြို့တွင် အခြေအနေများတင်းမာလျက်ရှိပြီး ရဲစခန်းတဝိုက်လူအုံနေကြောင်း။ မြို့တွင်း၌လည်းလူစုနေကြောင်းအကြောင်းကြားလာပါတယ်။ ပြဿနာဇစ်မြစ်ကို ရှာဖွေလျက်ရှိပါတယ်။ သံတွဲမြို့၌ ၉၆၉တရားပွဲများဆက်တိုက်ဆိုသလိုပေါ်ပေါက်လာပြီးနောက် မြို့အတွင်းဘာသာရေးအစွန်းရောက်မှုမြင့်တက်လာခဲ့သည်။ အရင်လများအတွင်းကလည်း မွတ်စလင်ပိုင်အိမ်များကို အစွန်းရောက်များမှဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်း၊ ဈေးဆိုင်များတွင် ပြဿနာများဖန်တီးလာခြင်း (ပြသနာမဖြစ်ပွားစေရန် မတရားသော်လည်း မွတ်စလင်များမှလိုက်လျောမှုများပြုလုပ်ပေးခဲ့သည်)၊ ဆိုင်ကယ်များစွာဖြင့်အော်ပာစ်ဆူပူမှုများကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။ ပြဿနာဖြစ်ပွားပါက သတ်ရန်လူစာရင်းပာူ၍ မွတ်စလင်အမည်များပါ list တစ်ခုကိုလည်း ၉၆၉များမှထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ သံတွဲမြို့သည်အစဉ်အဆက်အေးချမ်းတည်ငြိမ်လာခဲ့ပြီး ကျောင်းသားသမဂ္ဂဥက္ကဌ ဦးထွန်းစိန်၊ ဦးကျော်ခင်စသည့် နာမည်ကျော်မွတ်စလင်များပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီး ကမန်တိုင်းရင်းသားအများစုနေထိုင်လျက်ရှိသည်။ (လေးသည်တော်)
Tags: Burma, Min Aung Hlaing, Muslim, OIC, Organisation of Islamic Cooperation, Rakhine State, Secretary-General of the United Nations, Thein Sein
This entry was posted on July 1, 2013 at 5:07 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
One Response to “Requesting OIC and ISLAMIC LEADERS to pressure UN, UNSG, UNGA and UNSC to take action on U Thein Sein, Min Aung Hlaing, 969 TERRORISTS and Rakhine State government”
Owise Citizen Ship
ဒီနေ့ နယူးယောက် မနက် ၁၁ နာရီ- သံတွဲမှာ ည ၁၁ နာရီလောက် အမေနဲ့ စကားပြောရတယ်။ အမေ့ကို ဆလာမ်ပေးပြီး နေကောင်းရဲ့လားတော့ မေးတော့- အမေက ဆလာမ်ပြန်ပြီး- နင်နေကောင်းဘို့က ပိုအရေးကြီးတယ်-၊ နင်က အလုပ်တွေ အများကြီးလုပ်ရဦးမှာ-၊ လောလောဆယ်မှာ နင်က ငါ့ထက် ပိုအရေးကြီးတယ်တဲ့။ ဒါ အမှန်စကားပါ။ အမေ့အသံက ကျွန်တော်ထင်ထား
တာထက် ပိုပြီးတည်ငြိမ်နေတယ်။ အသက် ၈၀ အရွယ်လို့တောင် မထင်ရဘူး။
အော်- အမေ၊ အမေ-၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဗျာ။ တစ်ခုခု ဖြစ်သွားရင်လည်း အမေ့ အတွက် ဂျနတ် တံခါးတွေ အားလုံးပွင့်နေပြီလို့ ကျွန်တော် လုံးဝ ယုံကြည်လိုက်ပါ တယ်။ အလ္လာဟ်အရှင် အမေ့ရဲ့ ယုံကြည်ချက်ကို လက်ခံတော်မူပါစေ။
ကျွန်တော်တို့က နှလုံးလှိုက်လှဲယုံကြည်ထားတဲ့ ဂျနတ် အတွက် ဒီထက်ပို ကြိုးစားရဦးမှာပါ။ ကျွန်တော်- လောကီ စည်းဇိမ်၊ ဂုဏ်ပကာသန ဘာမှ မလို
ချင်ဘူး-၊ အွမ္မတ်အတွက် ပေးဆပ်မှု စိတ်တစ်ခုတည်းကိုပဲ လိုချင်ပါတယ်
ယာ- အလ္လာဟ်။ အရှင် အသိအမှတ် ပြုတော်မူပါ